HIMARS - धेरै लन्च रकेट प्रणाली (उच्च गतिशीलता Artillery रकेट प्रणाली): विशेषताहरु
HIMARS - धेरै लन्च रकेट प्रणाली, परिस्कृत गतिशीलता संग। यो तोप एकाग्रता क्षेत्रहरु, हावा रक्षा प्रणाली, ट्रक, समर्थन एकाइहरु, Armored वाहन र अन्य वस्तुहरु आक्रमण गर्न डिजाइन गरिएको छ। प्रणाली को HIMARS दोस्रो समारोह यसको सेना समर्थन छ र सुनिश्चित गर्न हो। गरेको यो प्रणाली, आधुनिक अमेरिकी हतियार प्रतीक जो अरू के घमण्ड हेरौं!
अमेरिकी सैन्य यस्तो जटिल सिर्जना गर्ने बारेमा सोच किन मुख्य कारण - लगभग कुनै पनि ठाउँमा airlifted सकिएन जो समुद्री कोर, मरीन, र तीव्र प्रतिक्रिया मोबाइल launchers को हतियार भागहरु लागि आवश्यकता।
मध्य-80s कम्पनी मा Loral Vought सिस्टम 227 कैलिबर र यसको मा माउन्ट ट्र्याक र wheeled चेसिस सुरु गर्न छ-barreled TPK (परिवहन र लन्च कन्टेनर) को विकास को संभावना अन्वेषण गर्न थाले। उच्च-गतिशीलता तोप प्रणाली सिर्जना गर्न कार्यक्रम पनि एक सैन्य सी-130 विमान मार्फत हावा परिवहन प्रणाली को संभावना मा लक्ष्य। पनामा मा लेट 1989 मा आयोजित थियो सञ्चालन बस Cause, बिल्कुल स्पष्ट HIMARS विकास आवश्यकतालाई बुझाउन।
1990 को गर्मी मा अमेरिकी सेना ट्रक चेसिस आधारित हल्का प्रतिक्रियाशील प्रणाली लागि माग गर्न थाले। को प्रोटोटाइप को प्रदर्शन सेप्टेम्बर 1994 मा भयो। एक वर्ष र आधा अमेरिकी आदेश निर्देशित हतियार आगो नियन्त्रण कम्पनीहरु र लकहीड मार्टिन मिसाइलहरु विधानसभा मिसिन MLRS HIMARS एक सम्झौता प्रवेश। करार मूल्य 22.3 अर्ब डलर राशि।
करार अन्तर्गत कम्पनीको विशेषज्ञहरु चार प्रयोगात्मक युद्ध मिसिन संकलन गरेका छन्। ती तीन चौथो परीक्षण विकासकर्ता गर्न बाँकी गर्दा, दुई वर्ष परीक्षण को लागि ग्राहक गर्न भन्दा हस्तान्तरण गरेका थिए। गर्मी 1998 मा, सेना अमेरिकाको विशेषज्ञहरु सफलतापूर्वक परीक्षण प्रोटोटाइप मिसिन MLRS HIMARS आधारमा ATACMS मिसाइल शूटिंग सञ्चालन।
गम्भीर परीक्षण उच्च गतिशीलता Artillery रकेट 2003 मा पारित प्रणाली (सिस्टम पूरा नाम)। unguided रकेट M26, MGM-140B मिसाइलहरु र MGM-164A जटिल ATACMS, साथै निर्देशित मिसाइलहरु MLRS सिस्टम: तिनीहरूले यस्तो गोले फायर समावेश। यो दिन, त्यहाँ एक चेसिस को TPK विभिन्न calibers फिट गर्न सक्छन् कि कुनै विश्वसनीय जानकारी छ। जनवरी 2004 मा, निर्माता मिसिन को प्रोटोटाइप परीक्षण पूरा गरिएको छ। फलस्वरूप, यो पुष्टि भएको थियो HIMARS - धेरै लन्च रकेट प्रणाली, सभ्य सामरिक लडाई र परिचालन विशेषताहरु छ जो। सकेसम्म धेरै सैन्य परीक्षा को एक मा शत्रुता को थिएटर पुन: सिर्जना गर्न। तिनीहरूले एक परिवहन विमान सी-130 प्रयोग गरेर परीक्षण साइट मा प्रोटोटाइप लिए। पाँच मिनेट भन्दा कम पछि कार unloaded थियो। त्यसपछि त्यो फायर स्थिति लिए र डिजिटल च्यानल लडाई मिसन द्वारा प्राप्त भयो। परिणाम छ रकेट प्रशिक्षण को एक volley उत्पादित थियो। संयुक्त अभ्यास / परीक्षण MLRS को प्रतिनिधिहरु, सेना र मरीन।
गर्मी 2005 मा, HIMARS मिसाइल सिस्टम सेवा आउन थाले। यसको शस्त्रागार HIMARS सिस्टम मा पहिलो एकाइ 27 क्षेत्र Artillery रेजीमेंट 18 ड्रम कोर अमेरिका भयो।
को 2000s मा, कम्पनी लकहीड मार्टिन MLRS र HIMARS लडाई प्रणाली को संरचना मा, लक्ष्य एक दूरी देखि बढ संग सटीक सम्पर्कको लागि डिजाइन भएको थियो कि P44 रकेट को एक प्रोटोटाइप विकास भएको छ। एक कन्टेनर 10 accommodating मिसाइलहरु डिजाइन चलाउन। को प्रोटोटाइप, को सहायक inertial निर्देशन को मोड मा, जीपीएस को मद्दतले सञ्चालन गर्न सक्छ स्थिर लक्ष्य नाश गर्न र लक्ष्य सार्नका लागि homing टाउको संग। दोस्रो मामला मा, मिसाइल एक बहु-उद्देश्य मिसाइलहरु JCM को सिद्धान्त संग सुसज्जित थियो।
को प्रोटोटाइप तीन मोड मा सञ्चालन एक homing टाउको थियो:
डपलर राडार। यो मिलिमिटर दायरामा संचालित। यो सबै मौसम अवस्थामा प्रयोग गर्न सकिन्छ। सार्ने लक्ष्य स्ट्राइकिङ्।
इन्फ्रारेड cooled। पहिचान र लक्ष्य classifies।
अर्ध-सक्रिय लेजर। थप लक्ष संग लक्षित विस्फोट।
यो 177-मिमी मोडेल कम मूल्य र थप विकास को संभावना अलग जो एक बूस्टर, रूपमा छान्नुभएको थियो। एक प्रोटोटाइप डिजाइन मा निर्मित एकाइ गरेर विशेषता एक बढेको शिर रकेट वा नरकको आगोजस्ता द्वितीय सञ्चितिको टाउको भाग को भाग, प्रयोग। भविष्यमा यो रकेट को लम्बाइ मा vozmonost वृद्धि र आम योजना छ।
मार्च 2007 मा यो रिपोर्ट थियो मिसाइल सफलतापूर्वक हावा टनेल मा परीक्षण गरिएको थियो कि, landfill नयाँ मेक्सिकोमा सेतो बालुवा मा रकेट इन्जिन को स्थिर जला र उडान परीक्षण। एक महिना पछि, यो परीक्षण को दोस्रो चरण कम गर्न सफल भएको थियो चिनिन थाले। प्रयोगात्मक नमूनाहरू P44 रकेट को परीक्षण को एक श्रृंखला समयमा यी रकेट डिजाइन जसको लागि मुछिनुभएको लड मिसिन HIMARS थियो।
मिसिन को आधुनिकीकरण
2006 को अन्त्यमा, कम्पनी लकहीड मार्टिन अमेरिकी सेना 1.8 मिलियन उन्नत ककपिट लडाई वाहन विकास गर्न सम्झौता संग हस्ताक्षर भएको छ। आधुनिकीकरण चिन्तित मुख्य रूप ड्राइभर लागि सुरक्षा सुधार। करार अनुसार, आधुनिकीकरण कार्य 30 सेप्टेम्बर 2010 भन्दा कुनै पछि अन्त थिए। क्याब्स गोलीले, shrapnel गोले र बारुद विरुद्ध जोगाउँछ थप हतियार प्राप्त।
मार्च 2008 मा, लकहीड मार्टिन को चार पायलट निर्देशित मिसाइलहरु को नयाँ विश्वव्यापी आगो नियन्त्रण प्रणाली प्रयोग जो सुरु-अप, घोषणा। तपाईं एक टेक्सास र अर्कान्सस कम्पनी कारखानों मा, प्रारम्भिक सानो-मात्रा उत्पादन लागि सम्झौता हस्ताक्षर गर्नु अघि अमेरिकी सेना परीक्षा लागि छ प्रोटोटाइप निर्माण गरेका थिए।
85 मी - मध्य-2008 मा, धेरै रकेट launchers HIMARS रकेट GMLRS रेकर्ड संग शूटिंग को समयमा उडान दूरी सेट थियो। निम्न वर्ष को नोभेम्बर मा, कम्पनी लकहीड मार्टिन पछिल्लो परीक्षण मा आंकडा 92 मी वृद्धि बताए। निर्देशित मिसाइलहरु को प्रयोगमा सूचना, छैन व्यापक उपलब्ध छ। यो कार्य उपलक्ष्य निर्णय चाहे पनि छैन स्पष्ट छ मिसाइलहरु, सुरु तिनीहरूलाई प्रत्येक यसको लक्ष्य पहिचान जसमा, वा त्यस्तो मिसाइलहरु को प्रयोग सामान्य अर्थ, गोलीबारी volley छैन।
मार्च 2009 मा, एउटै बहुभुजको सेतो बालुवा मा, जुन बेलामा HIMARS सिस्टम शुरू मिसिन2नियन्त्रण विरोधी विमान मिसाइलहरु, SLARAAM भनिन्छ झगडा गर्ने परीक्षण, बित्यो। यो अभ्यास एक कन्टेनर मा रकेट लागि अद्यावधिक मिसाइलहरु र विधानसभा रेल को प्रदर्शन परीक्षण बाहिर थिए। परिवहन र लन्च कन्टेनर ATACMS मिसाइलहरु देखि अन्तिम redesigned। जब तपाईं चलान विरोधी विमान गोले प्रयोग HIMARS आगो नियन्त्रण प्रणाली, सफ्टवेयर धेरै अंतिम रूप जो। आगो नियन्त्रण प्रणाली अंतिम रूप हुनेछ जब हुनेछ, र SLAMRAAM मिसाइलहरु लागि ढुवानी कन्टेनर सेट गरिनेछ अप, तिनीहरूले सेवा जानेछ। अमेरिकी सशस्त्र बलहरु को आदेश सतह-को हावा मिसाइल भविष्यमा HIMARS सिस्टम मिसिन मा एक वितरण नेटवर्क-केंद्रित हावा रक्षा प्रणाली मा प्रयोग गर्न भनेर योजना छ।
आगो HIMARS को बप्तिस्मा
धेरै लन्च रकेट प्रणाली, जुन हामीले आज विचार गर्दै छन्, "सञ्चालन इराकी स्वतन्त्रता" मा आगो को एक बप्तिस्मा पारित गर्न व्यवस्थित। यसको पछिल्लो लडाई प्रयोग फेब्रुअरी 14, 2010 मा भयो। Marjah को Afghan शहर मा नेटो antiterrorist सञ्चालन समयमा,2HIMARS सिस्टम मिसाइल लक्षित देखि भटक र, एक नागरिक भवन मार 12 नागरिकहरु हत्या।
जनवरी 2011 मा, कम्पनी लकहीड मार्टिन बस अन्तर्गत 140 $ लाख राशि कुल लागत जो 44 HIMARS प्रणाली, निर्माण गर्न एक सम्झौता सम्मानित गरिएको थियो। यो क्रम समाप्तिमा, 2013 मा, लडाई विमान संख्या अमेरिकी सशस्त्र बलहरु संग सेवा, 375. 2015 मा थियो, संख्या 480 प्रतिलिपिहरू वृद्धि गरेको थियो। संयुक्त अरब एमिरेट्स, सिंगापुर र जोर्डन - सुसज्जित धेरै रकेट launchers संग मिसिन, अमेरिकी मात्र होइन तर सेना र यसको मित्र आपूर्ति।
विनिर्देशों HIMARS सिस्टम
धेरै लन्च रकेट प्रणाली समावेश:
वाहन M142 मोडेल झगडा।
परिवहन र वाहन लोड।
मिसाइलहरु (निर्देशित र unguided)।
आगो नियन्त्रण हो।
वाहन लडिरहेका 5-टन ट्रक स्टीवर्ट र Stevenson 6x6 को अपग्रेड संस्करण हो। डिजेल, 6.6-लीटर, 6-सिलेंडर Caterpillar कल इन्जिन 290 अश्वशक्ति विकास। ईंन्धन ट्यांक 56 गैलन एक मात्रा छ। सीमा cruising 480 मी छ। इन्जिन स्वचालित संग अग्रानुक्रम मा काम गर्दछ गियरबक्सलाई सात दायरा (तपाईँले स्वचालित छ छाप छैन)। निलम्बन पात पानीका मुहानहरू एक पैराबोलिक आकार छ। वाहन अवकास 564 मिमी छ। ट्रक 900 मिमी को एक गहिराई पानी बाधा आँधी गर्न सक्नुहुन्छ। ड्राइभर, गनर र कमान्डर: को चालक दल तीन मान्छे हुन्छन्। चरम अवस्थामा, कार्य ह्यान्डल गर्न सक्छन् र एक मानिस।
प्याकेज गाइड खडा rocketry छैन। लागू गाइड रूपमा मानकीकृत डिस्पोजेबल TPK MLRS प्रणाली मिसिन संग। HIMARS लन्चर निर्देशित र unguided मिसाइलहरु MLRS सिस्टम को कुनै पनि, साथै आगो सक्नुहुन्छ एक मिसाइल को मोडेल MGM-MGM-140 र 164 ATACMS जटिल। पछिल्लो सामरिक मिसाइल प्रक्षेपण, परिवहन र लन्च कन्टेनर गोली बदलिएको छ जब एक चार्ज। चार्ज र TPK सील कारखाना मा स्थान लिन्छ। मानक TPK दुई भन्दा बढी टन र ट्यूब6ग्लास फाइबर, बंधुआ जुन एल्यूमीनियम पिंजरे को छन् अलिकति वजन। परिक्रमण गति 10-12 RPM फायर गर्दा, projectile imparting गाइड भित्र लागि कुंडलित Polozkov छन्। सामरिक मिसाइल को डिस्पोजेबल कन्टेनर सिधै शुरू गरिएको छ। यस्तो TPK मिसाइल यसको लडाई तत्परता कायम राख्ने, कम्तिमा 10 वर्ष को लागि भण्डारण गर्न सकिन्छ।
रिचार्जिंग र आगो नियन्त्रण
शुल्क विनिमय लागि संयन्त्र (TZM) एक स्लाइड कन्सोल सुसज्जित रूपमा डिजाइन गरिएको छ बिजुली सामान उचाल्ने यंत्र। संयन्त्र टैक्सी र टाढाको कन्सोल मार्फत दुवै व्यवस्थापन गर्न सक्नुहुन्छ। दोस्रो embodiment फरक स्पष्टता देखि, विशेष उपयुक्त छ। एक होल्डर PZM मा WPK चार्ज गर्न, उत्तरार्द्ध तेर्सो स्थिति मा राखिएको छ, र उनको हात विस्तार। एक कन्टेनर संग क्रेन उठाएर र स्थान मा सेट। को सामान उचाल्ने यंत्र कन्टेनर को गुरुत्वाकर्षण को केन्द्र माउन्ट छ।
आगो नियन्त्रण प्रणाली, साथै एक इलेक्ट्रनिक्स मोड्युल र संचार उपकरण वृद्ध BM MLRS जस्तै तरिकामा प्रदर्शन गर्दै छन्। तथापि, मिति गर्न, यो कार को एक आधुनिक संस्करण, इन्टरफेस सुधार भएको छ जो रिमोट नियन्त्रण विकास गरे। शब्द herein परिचालन इन्टरफेस र तत्व चाहनुभएको छ।
परिवहन र लोड वाहन
परिवहन र वाहन लोड लागि, यो एउटा जहाज क्रेन र ट्रेलर संग ट्रक छ। एक लड मिसिन, यो एक 6x6 छ। भारोत्तोलन र slewing क्रेन ट्रक को रियर मा स्थित छ। यो संग, अपरेटर परिवहन सुरुवात कन्टेनर overcharging वहन। ट्रेलर थप TPK ओसारपसार गर्न आवश्यक।
झगडा मिसिन एक परिवहन विमान सी-130 "हर्कुलेसक्लस्टर" मा ओसारपसार गर्न सकिन्छ। यसलाई देखि ओराल्नको पछि, त्यो कुनै 10 भन्दा बढी मिनेट पूर्ण तत्परता छ। रकेट HIMARS वर्ग प्रविधी धेरै मोबाइल छ, त्यसैले कर्तव्य को लाइन, त्यो तुरुन्तै गोलीबारी लाइन छोडेर। हाल परिमार्जन वाहन चेसिस7टन को क्षमता बोकेको गर्न स्थापना भाग HIMARS तोप प्रणाली को भेद विकास गरे।
रोचक सुविधाहरू अर्को बिट:
मिसिन आयाम: लम्बाइ - 6949, चौडाइ - 2400, उचाइ - 3180 मिमी।
वजन गोले बिना मिसिन झगडा: 13696 किलो। लगभग 16000 किलो - गोले संग। को चेसिस वजन 8273, र कन्टेनर संग मोड्युल - 2915 किलो।
अधिकतम गति चार्ज कार - 89 किमी / एच। बारूद बिना वेग5भन्दा मी / घन्टा छ।
60 डिग्री - जो मिसिन हटाउन सक्नुहुन्छ अधिकतम विचलन।
आगो को तेर्सो कोण - 280 डिग्री।
त्यहाँ र रूस मा मोबाइल रकेट तोप। यो MLRS "आँधी" को एक परिवार द्वारा प्रतिनिधित्व छ। त्यहाँ दुई प्रकारका छन् - "ग्रैद" र "Smerch"। गेज "ग्रैद" सिस्टम 122 मिमी छ। यो एक आधुनिक लडाई वाहन, स्वचालित रूपमा नियन्त्रण प्रणाली र unguided projectiles हुन्छन्। यो त बोल्न लागि, "आँधी" को साना संस्करण हो।
MLRS "Smerch" थप अमेरिकी HIMARS सिस्टम जस्तै छ। 130 मी - गोले आकार पहिले नै 300 मिमी र अधिकतम सीमा हो। "ट्विस्टर" unguided मिसाइलहरु र correctable सुरु हुन्छ। भविष्यमा, यो "आँधी" मा उडान दायरा वृद्धि गर्न संभावना लागि अनुमति दिन्छ। MLRS "Smerch" पनि एक स्वचालित निर्देशन प्रणाली संग एक आधुनिक कार बनेको छ।
हतियार homogeneous आधुनिक ट्यांक: बल, rikoshetosposobnost
Toothed युग्मन: स्कोप र सुविधाहरू
सबै भन्दा ठूलो रूसी मासु प्रशोधन बिरुवाहरु
यूरिया-formaldehyde रेजिन: उत्पादन, गुण र आवेदन
Hallux valgus संग हाडजोर्नी Insoles: समीक्षा, मूल्यहरू तुलना
Intercoms लागि विश्वव्यापी कुञ्जीहरू हात हुन्छ। को इण्टरकम लागि एक प्रमुख कसरी बनाउने?
Benedict Spinoza। "नीतिशास्त्र" र पदार्थ को सिद्धान्त
शीर्ष vetkliniki नोवोसिबिर्स्क: समीक्षा
Gennady Moskal: तीन नामका जीवनी नीति
Fertilizing टमाटर - ठूलो बाली एक एक प्रतिज्ञापत्र
अनन्त जीवनको भोजमा - एस्केन्सन
Subtleties र प्रवर्तन को व्यवस्था 229 को पासो